Shirkadda Aeroflot ayaa duulimaadyo ku tagta Mexico, Jordan, Dominican Republic iyo Mauritius
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Shirkadda Aeroflot ayaa duulimaadyo ku tagta Mexico, Jordan, Dominican Republic iyo Mauritius
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dominican Republic • Jordan War Degdeg ah • Wararka Mauritius • Wararka Mexico • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Azur Air waxay hadda u duushaa Mexico iyo Dominican Republic, iyadoo aysan jirin adeeg diyaaradeed oo Ruush ah Jordan iyo Mauritius.
Adeegga hawada ee Mexico ayaa dib loo bilaabay May 2021.
Duulimaadyadii u socday Jamhuuriyadda Dominican ayaa dib loo bilaabay horraantii Ogosto.
Adeegga hawada ee Urdun iyo Mauritius ayaa si rasmi ah loo furay bishii July.
Diyaaradda Aeroflot ee laga leeyahay dalka Ruushka ayaa laga yaabaa inay duulimaadyo ka bilowdo Mexico, Mauritius, Jordan iyo Dominican Republic, sida uu sheegay agaasimaha guud ee shirkadda Mikhail Poluboyarinov oo wareysi siiyay telefishinka Ruushka.
Madaxa Fulinta ee Aeroflot Mikhail Poluboyarinov
“Waxaan sidoo kale qorsheyneynaa inaan duulimaadyo u furno Mexico, oo ah meel aad u xiiso badan oo loo safro. Waxaan qorsheyneynaa oo aan ka fiirsaneynaa duulimaadyada aada Dominican Republic, waxaan kaloo tixgelinaynaa Mauritius iyo Jordan sidoo kale, ” AeroflotAyuu yiri Madaxa Fulinta.
Adeegga hawada ee Mexico ayaa dib loo bilaabay May 2021, iyadoo duulimaadyada halkaas ay fuliyeen oo keliya Hawada Azur hadda.
Duulimaadyadii Jamhuuriyadda Dominican ayaa dib loo bilaabay horraantii Ogosto, Hawada Azur sidoo kale waa sidaha kaliya ee halkaas u duulaya hadda.
Adeegga hawada ee Urdun iyo Mauritius ayaa si rasmi ah loo furay bishii Luulyo, in kasta oo aysan jirin shirkad Ruush ah oo duullimaadyo halkaas ka samaysay illaa hadda.